နန်းဆန်သူလေး လဲ့ယမင်း နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း – DigitalTimes
အနုပညာလောကထဲကို ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာမော်ဒယ်လုပ်ရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပါ ဝင်ရောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်ချစ်သော မိန်းမများ ဇာတ်ကားမှာ အရောင်းစာရေးမလေးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမနဲ့တွေ့တုန်း သူ ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကို မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. လတ်တလောညီမလေးရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကို ပြောပြပေးပါလား။
လတ်တလောမှာတော့ ဓာတ်ပုံတွေပဲ အများဆုံးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကြော်ငြာတွေလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်။
Q. ညီမလေး ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်ချစ်သောမိန်းမများ ဇာတ်ကားလေးက ပရိတ်သက် အားပေးမှု တော်တော်ရခဲ့တယ်။
အဲဇာတ်ကားလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရတွေကော ရှိခဲ့လား။
အဲဒီဇာတ်ကားမှာ ပရိတ်သက်တွေ ယမင်းကိုသတိထားမိတာ ယမင်းကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ကိုမြင့်မြတ်ကြောင့်ပါ။ ကိုမြင့်မြတ်က ယမင်းကို ရွှေစင်လေး နန်းဆန်တယ် ဆိုပြီး တွေတိုင်း သူအသံနဲ့ပြောတာကို ပရိတ်သတ်က သတိထားမိသွားတာပေါ့နော်။ အဲဒါလေးကတော့
အမှတ်တရလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အခု ယမင်းကို ပရိတ်သက်တွေရော မိတ်ဆွေတွေရော နန်းဆန်တယ်။ နန်း ဆန်တယ်ဆိုပြီး စတာတွေရှိလာတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ဝမ်းသာပါတယ်။
Q. နောက်ထပ်ရော ဇာတ်ကားတွေရိုက်ဖို့ လက်ခံထားသေးလား။
တကယ်လို့ အခွင့်အရေးရရင်တော့ ရိုက်ချင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ မရှိသေးပါဘူး။
Q. ဒီဇာတ်ကားက ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားလား။
အရှေ့မှာတော့ ကိုမင်းသွေးနဲ့ တစ်ကားရှိတယ်။ ကိုမြင့်မြတ်တို့နဲ့က ဒုတိယမြောက်ကားပါ။
Q. သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်ခဲတွေရောရှိခဲ့လား။
ယမင်းရိုက်ရတဲ့ ဇာတ်ကားနှစ်ကားလုံးကလည်း ကာရိုက်တာက အရမ်းခက်ခက်ခဲခဲလည်း မဟုတ်ဘူး။ ယမင်းအပြင်ကပုံစံ အတိုင်းပဲ လုပ်ရတာဆိုတော့ အဲဒီရှေ့မှာလည်း MTV တွေရှိုက်ထားတာရှိတော့ အရမ်းကြီးတော့ အခက်ခဲမရှိပါဘူး။ ပုံမှန်လုပ်နေကျ ကာရိုက်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့
အခက်အခဲတွေ ရှိမှာပေ့ါနော်။ အခုကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာ အခက်အခဲမှ မရှိပါဘူး။
Q. ညီမလေး Fashion တွေကအရမ်းမိုက်တယ်နော်။ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါလား။
Fashion နဲ့ပတ်သက်ရင် ယမင်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပုံစံကိုကြိုက်တယ်။ ခက်မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းတွေကို ကြိုက်တယ်။ ယမင်းက Fashion နဲ့ပတ်သက်ရင် မိန်းမ သိပ်မဆန်ဘူး။ အလှမကြိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
Q. Photo Model တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို စတိုင်တွေက ကိုယ်နဲ့လိုက်တယ် လို့ထင်လဲ။
ယမင်း က ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် မရီဘူး။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြုံးလိုက်လို့ရှိရင် မလိုက်ဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ ယမင်း ဓာတ်ပုံကိုမြင်ရင် လူတွေက ချေတယ်။ မိုးတယ် လို့ ထင်ကြတယ်။အပြင်မှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။
Q. လက်တလော ကိုင်ထားတဲ့ ဖုန်းBrand ကို ပြောပြပေးပါလား။
iphone ကိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ iphone ကိုင်ဖြစ်တာကလေ ဓာတ်ပုံလည်း ရိုက်လို့ ကောင်းတယ်။ စက်လည်း မဟန်းဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုင်ဖြစ်နေတာပါ။
Q. ဖုန်းထဲမှာ ဘယ်လို app တွေသုံးဖြစ်လဲ။
ယမင်းကလေ ဓာတ်ပုံကိုရူးသွပ်တာ့ photo edit လုပ်တဲ့ app တွေအများကြီးပဲ။ ဆိုရှယ်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ Facebook , Instagram အဲလောက်ပါပဲ။
Q. ဖုန်းကို ကိုယ်ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက် ဘယ်လို အသုံးပြုဖြစ်လဲ။
မိုးလင်းတာနဲ့ဖုန်းသုံးဖြစ်တယ်။ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးအထိ သုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်အပြင်မထွက်ပဲနဲ့ ဖုန်းသုံးနေတာနဲ့ကို ဒီနေ့အပြင်မှာ ဖြစ်နေတာတွေကို သိနိုင်တယ်လေ။
Q. ဖုန်းက လူတိုင်းအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အသုံးဝင်တယ်လို့ ထင်လဲ။
ဖုန်းတွေ မရှိခင်တုန်းကဆို တစ်ယောက်ယောက် တစ်ခုဖြစ်ရင်တောင် မသိရဘူး။ အခုကျတော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဘယ်သူဘာဖြစ်လည်း ဆိုတာ သိနိုင်တယ်။အဲဒီအတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
Q. ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ခေတ်စားလာတဲ့အပေါ် ညီမလေးအမြင်ကိုပြောပြပေးပါလား။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ခေတ်စားလာတာက အနုပညာရှင်တွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အရင်တုန်းက အနုပညာရှင်တွေဆိုရင် ပရိတ်သတ်နဲ့ ထိတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် အရမ်းခက်တယ်။ အခုဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကနေချပြခွင့်ရတယ်။ ပရိတ်သတ်နဲ့လည်း
Q. အင်တာနက်ရော နေ့စဉ်သုံးလား။ ကိုယ်ပိုင်ဒေတာနဲ့သုံးလား။Package နဲ့သုံးလား။
အင်တာနက်ကတော့ နေ့တိုင်းမိုးလင်းတာနဲ့ သုံးတယ်။ Package ပဲဝယ်သုံးတာဖြစ်တယ်။ Package နဲ့သုံးရတာတန်တယ်။
Facebook Comment ကြောင့် သေဒဏ်ကျခံရသူ